डिजिटल फाइनान्सको प्रयोग बढाउन अब यसो गरौं ! ~ Banking Khabar
डिजिटल फाइनान्सको प्रयोग बढाउन अब यसो गरौं !
बैंकिङ खबर । समय बदलियो, अवसरको प्रचुरताका कारण मानिस व्यस्त बन्दै गयो । अब उसलाई चेक लिएर बैंकसम्म पुग्न वा चेकमा लिखित आदेश दिएर भुक्तानी गर्न झन्झट लाग्न थाल्यो । सञ्चार जगत्ले छोटो समयमा मारेको क्रान्तिकारी छलाङका कारण हात–हातमा स्मार्ट फोन पुगिसकेको छ । इन्टरनेटको विकासले समग्र विश्वलाई साँघुरो बनाइसकेको छ । व्यक्ति अनेकौँ सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध छ । देश–विदेशका खबर तथा नवीनतम आविष्कारबारे व्यक्ति जानकार छ । तर, अझै कुनै भुक्तानी गर्नुपर्दा चेक बोकेर बैंक धाउनुपर्छ । हिजो जीवनलाई सरल बनाउने चेक अब उसलाई झन्झटको भारी लाग्न थाल्यो । उपभोक्ताको यही मनोविज्ञानलाई बुझेर वित्तीयसंस्थाहरूले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन थाले । डेभिड तथा क्रेडिट कार्डको विकास भयो । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई ‘एटिएम’ सुविधा प्रदान गर्न थाले । अब कार्डको सुविधा लिने ग्राहक आफ्नो खाताबाट पैसा निकाल्न चेक लिएर बैंक धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भयो । पैसाको कारोबार बढी हुने चिकित्सालय, शिक्षालय, सपिङ मल, पार्कलगायतमा एटिएम मेसिन राख्न बैंकहरूबीच होडबाजी नै चल्यो । यसले बैंक र ग्राहक दुवैलाई सहजता दियो । यसैबीच अन्तरबैंकिङ नेटवर्कको विकास भयो । अब एउटा बैंकको एटिएम प्रयोग गरी जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट पैसा निकाल्न सकिने भयो । एउटा बैंकको चेक अर्को बैंकमा जम्मा गर्न सकिने सुविधा यसअघि नै विकसित भइसकेको थियो ।
नवीनतम प्रविधिको बलमा बैंकहरूले अनेकखाले सुविधा विस्तार गर्दै लगे, जसमा केही दशकअघि मात्र पनि असम्भव मानिएका सुविधासमेत सामेल थिए । सुविधाविस्तारसँगै झन्झटको परिभाषा र उपभोक्ताको आवश्यकता पनि बदलिँदै गयो, जसले कागजी मुद्रा वा त्यसको वैध सांकेतिक चिह्न चेकलाई पनि झन्झटको भारी सावित गरिदियो । आजको युगले विद्युतीय भुक्तानीलाई अङ्गीकार गरिसकेको छ । जागरुक उपभोक्ता यसमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । विकसित मुलुकहरूले ‘क्यासलेस सोसाइटी’को अवधारणालाई साकार तुल्याइसकेका छन्, यद्यपि मुद्राशून्य अवस्था भने कतै पनि छैन । विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरू पनि मुद्रामाथिको समाजको निर्भरता घटाउन अभियान चलाइरहेका छन् । नेपाल सरकार पनि यही अभियानमा छ, जसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक आक्रामक रूपमा लागिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो सक्रियतामा सेवाप्रदायक वित्तीयसंस्थाहरूले यथासम्भव साथ दिइरहेका छन् । सरकारी कार्यालयदेखि निजी संघसंस्थासम्म, ठूला सपिङ मलदेखि तरकारी बजारसम्म, हवाईजहाजको टिकटदेखि स्थानीयस्तरका छोटा दूरीमा चल्ने टेम्पोको भाडासम्म विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा विस्तार भइसकेको छ र द्रुत गतिमा हुँदै छ । यद्यपि, अहिलेकै विस्तारलाई पर्याप्त भने मान्न सकिँदैन, यसलाई क्रान्तिकै रूपमा गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ ।
दिनहुँजसो दर्जनौँ स्थानमा ‘क्युआर कोड’ प्रदान गरिएका खबर आउँछन् । नगद वा डिम्याटको खाता खोल्न बैंक तथा क्यापिटल धाइरहनुपर्दैन । खाता सञ्चालनका लागि घरबाटै विद्युतीय आवेदन दिएर अनलाइन सुविधा लिन सकिन्छ । आफ्नो खाताको पैसा मोबाइलबाटै अरूको खातामा स्थानान्तरण (ट्रान्स्फर) गर्न सकिन्छ । अनलाइनमार्फत नै ‘आइपिएस’ सुविधा लिन सकिन्छ, जसको प्रयोगले जुनसुकै बैंकमा रहेका जुनसुकै खातामा घर बसी बसी मोबाइल, ट्याबलेट वा कम्प्युटरबाट पैसा पठाउन सकिन्छ । आफ्नो खातामा पैसा घटबढ भएको विवरणको जानकारी लिन बैंक धाइरहनुपर्दैन, न त इन्टरनेट बैंकिङमार्फत स्टेटमेन्ट लिइरहनु नै पर्छ, मोबाइल बैंकिङ/एसएमएस बैंकिङको सुविधा लिएपछि कारोबारलगत्तै खातामा भएको परिवर्तनको विवरण मोबाइलले एसएमएसमार्फत सूचित गर्छ । प्रायः प्रसिद्ध बजार तथा सेवाकेन्द्रहरूमा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसमा न क्यास बोक्ने झन्झट रहन्छ, न त खुद्रा पैसाका लागि भौँतारिनुपर्छ । समय र श्रमको खर्चविना रुपैयाँमा मात्र नभएर पैसामा समेत ‘एक्युरेट’ भुक्तानीको सुविधा विद्युतीय भुक्तानीमा छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नगद भुक्तानीभन्दा विद्युतीय भुक्तानीमा विशेष छुटसमेत दिइने गरेको छ । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेक वा पैसा बोकेर घण्टौँसम्म लाइनमा बस्ने प्रचलन कायमै छ । किन त ? यहाँ यसका कारणहरू खोतल्नु वाञ्छनीय छ किनकि जनसाधारणमा जागरण नआएसम्म र उनीहरूले विद्युतीय भुक्तानीको ज्ञान हासिल गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अभ्यस्त नभएसम्म र यसलाई दैनिक जीवनको अङ्ग नबनाएसम्म सेवाप्रदायक, नियामक निकाय, सरकार, सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै पक्षले जति नै जोड गरे पनि भौतिक मुद्रामाथिको निर्भरतालाई निरुत्साहित गर्न सकिँदैन ।
विद्युतीय भुक्तानीप्रति सामाजिक उदासीनताका कारणहरू
– वित्तीय साक्षरताको कमी
– विद्युतीय भुक्तानीको महत्त्वबोध नहुनु
– प्राविधिक विषयमा रुचि र ज्ञानको अभाव
– इन्टरनेट अत्यावश्यक, तर पहुँचमा छैन